भारतलाई नेपालको पत्र: आफ्नै भूमिमा हिँड्न किन अनुमति लिनुपर्यो ? - SangaloKhabar
भारतलाई नेपालको पत्र: आफ्नै भूमिमा हिँड्न किन अनुमति लिनुपर्यो ?
व्यासका एक जना स्थानीय गुन्जी नागरिकले कौवा क्षेत्रमा रहेको मन्दिरमा आएर पूजा पाठ गरेर फर्किएको बताउँछन् । ‘पूजा पाठका लागि आउँछौं भन्ने खबर आएको थियो,’ ती स्थानीयले भने, ‘हामीले सुरक्षाकर्मीसँग समन्वय गरेर गर्नुहोला भनेका हौं ।’अहिले कोरोनाका कारण प्रवेशमा कडाइ भएको अवस्थामा भारतीय नागरिक स्थायी काठेपुल लगाएर एक दुई घण्टा पूजा गरेर फर्किएको पाइएको छ । सशस्त्र प्रहरीको टोली गागाबाट कौवा पुग्दासम्म उनीहरू त्यहाँ भेटिएनन् । गागाबाट कौवा पुग्न तीन घण्टा बढी समय लाग्छ । व्यासको छाङरुस्थित गागामा सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ) को बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) स्थापना भएयता भारतले कालापानी क्षेत्रमा आवतजावतमा थप कडाइ गरेको छ । भारतले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई पनि अहिले माथिल्लो कौवा क्षेत्रभन्दा माथि गस्ती गर्न दिएको छैन ।
कालापानीभन्दा तल आएर उनीहरूले ढुंगा थुपारेर घेरबार लगाएका छन् । उनीहरू पहिले बसेको भन्दा झन् एक किलोमिटर तलै घेरबार लगाएर बसेका छन् । यसअघि उनीहरूले कृत्रिम रूपमा खडा गरेको कालापानीको मुहान र मन्दिरभन्दा निक्कै तल ढुंगाको घरेबार लगाएर बसेका थिए । सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले रोकेपछि सशस्त्रको टोली अघि बढ्न नसकेको सुरक्षा स्रोतले जनायो । ब्यासको छाङरुबाट झन्डै १४ किलोमिटर टाढा कालापानी रहेको छ । आफ्नै भूमि जान सुरक्षाकर्मी समेत पाउन सकेका छैनन् । स्थानीय त अहिले तल्लो कौवासम्म पनि जान डराउँछन् ।
सरकारले गत २९ असारमा व्यासको छांगरु गागामा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म राख्ने निर्णय गरिसकेको छ । कौवामा तल्लो कौवा वा माथिल्लो कौवा कुन ठाउँमा बिओपी राख्ने भन्ने विषयमा जमिन हेर्न तथा भूगोलको अध्ययन गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिले निर्णय गरिसकेको प्रजिअ पोखरेल बताउँछन् । ‘हामी कौवा क्षेत्रमा छिट्टै सशस्त्रको बिओपी स्थापनाका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिबाट निर्णय गराएका छौं । तिंकरमा बिओपी बस्छ । आफ्नो भूमिमा राज्यको उपस्थिति गराउन कुनै कसुर बाकी राख्दैनौं ।,’ उनले भने ।
व्यासको छांगरु र तिंकर गाउँ पुग्ने बाटो निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले यो वर्ष ३० लाख रुपैयाँ स्थानीय सरकार र संघीय सरकारले पनि यो क्षेत्रमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्दै छन् । तर पनि दसंैअगावै यो क्षेत्रमा नियमित बाटो सुचारु हुने अवस्था नरहेको स्थानीय बताउँछन् । -नरेन्द्र कार्कीले लेखेको यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन १५, २०७७ समय: ८:२७:०५